Beenta Sheet-ka - Warshad Macdanta Qingdao TianHua Yihe
Daabacaadda Birta Xaashida waxaa loola jeedaa farsamooyinka iyo hababka la xiriira qaabeynta iyo foorarsiga biraha xaashida ee sameynta qaybo kala duwan. Badanaa waxay qaabeeyaan biraha qafiifka ah ee 0.006 iyo 0.25 inji oo ah badeecad la isticmaali karo. Been-abuurka birta xaashida waxaa ka mid ah geedi socodyo badan oo mashiin ah oo loogu talagalay in la isu geeyo, la jaro, ama loo sameeyo shaashad bir ah. Birta xaashidu waa mid si aan caadi ahayn u qiimo badan, gaar ahaan xilliyada casriga ah ee warshadaha. Dhamaan waxaas oo dhan waxaa looga faa'iideysanayaa soo saarista aaladaha birta ah, meydadka gawaarida, qeybaha diyaaradaha, qeybaha elektaroonigga ah, qalabka dhismaha dhismo, iyo kuwo kaloo badan.
Adeegyada been-abuurka ee waraaqda waxay ku siinayaan xal wax-ku-ool ah oo baahida loo qabo baahiyahaaga wax soo saar. Adeegyada been-abuurka ahi waxay u dhexeeyaan nooc hooseeya oo heer hoose ah illaa wax soo saar mug weyn leh oo ku shaqeeya noocyo kala duwan oo farsamooyin been abuur ah oo ay ka mid yihiin biyojet, iyo goynta plasma, bareegyada korantada iyo birlabta, shaabadaynta, feerista, iyo alxanka.
Geeddi-socodka Soo-saarka Birta
Qeyb kasta oo bir ah, waxay leedahay hanaan wax soo saar gaar ah, waxa loogu yeero socodka socodka. Iyada oo ay ku kala duwan yihiin qaab dhismeedka qaybaha birta xaashida ah, socodka socodka ayaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay. Nidaamka hoos lagu sharaxay ayaa badiyaa ah waxa warshadeena sameyn karto. Xarumaheenna macdanta ee birta ah ayaa noo oggolaanaya inaan ka shaqeyno qaybo ballaaran oo shaqooyin ah. Waxaan awood u leenahay in aan been abuurno shaqo yar oo isku dhafan oo ay ka mid yihiin iimaan sare oo ka kooban qalabaysan.
A Goynta Birta. Waxaan leenahay mashiinka feerka ee Amada CNC, mashiinka goynta leysarka, iyo mashiinka jarista ololka ee goynta birta xaashida.
Laabaya. Waxaan haynaa 4 qaybood oo foorarsiga mashiinka ah, 3 nooc oo loogu talagalay birta xaashida ah, 1 loo dhigay bir culus.
C. Wareejinta. Waxaan nahay ISO 9001 & ISO 3834-2 shahaado lasiiyay, howlwadeenada alxanka ayaa la tababaray iyo EN ISO 9606-1 oo shahaado leh. MIG, TIG, Oxy-Acetylene, alxanka qaansada iftiinka, iyo qaabab kale oo badan oo alxamid ah ayaa loo heli karaa si loogu amaano noocyada gaarka ah ee biraha iyo dhumucda aad u baahan doonto inaad soo saarto qalabka aad u baahan tahay.
D.Rive Riving. Waxaan leenahay 2 nooc mashiinka riveting cadaadiska si loo ogaado isku xirnaanta lagu kalsoonaan karo ee laba qaybood.
Dahaarka E.Powder. Waxaan leenahay khad rinjiyeyn u gaar ah oo buuxiya shuruudaha deegaanka ee dowladda, si loo bixiyo hal-joogsi been abuur ah oo loogu talagalay macaamiisha shuruudaha kala duwan. Xabad toogasho, dahaadh budo ah, rinjiyeyn iyo ciideynta iskeed ayaa loo leeyahay, galvanizationna waa loo gacan galiyay.
F. Qalabka baaritaanka. Waxaan haynaa habka kormeerka tayada sida waafaqsan ISO9001: 2015.
Waxyaabaha lagu sameeyo been-abuurka Birta
• Birta Kaarboonka
• Bir daxal laheyn